← Trojan War, Helen and Homer
July 7, 2009 · 11:31 pm
ဤနေရာတွင် ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာရော၊ လာရောက်လည်ပတ်သူ မိတ်ဆွေများ၏ အချိန်ပါမဖြုန်းလို၍ ပေယျာလကံထားထားသော ကိစ္စတစ်ခုကို အချိန်အပုပ်ခံပြီး နည်းနည်းတော့ ပြောရပါဦးမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်သက် အကြောရယူလိုခြင်း၊ အနိုင်ပိုင်းလိုခြင်းဟူသော ကျဉ်းမြောင်း၍ ကလေးဆန်သည့် စိတ်တစ်ခုကို အကြောင်းပြုကာ ကျနော့်အပေါ် တိုက်ခိုက်နေမှုများကို မိတ်ဆွေရင်း တော်တော်များများတော့ သိထားကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
လောကအလှမှ စာမူများကို သင်ကာက ရောင်းစားပါသည်ဟု မေးလ်များပို့၍ စွပ်စွဲသောအခါ အတော်ပင်ရယ်ရပါသည်။ လေဖမ်းဝါးတန်းချည် စွပ်စွဲမနေဘဲ သက်သေအထောက်အထားနှင့်ပြပါဟု ပြောသောအခါ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေ၏။ အခုထိလည်း အထောက်အထားစုသလိုလို၊ ထောက်လှမ်းနေသလိုလို အိယောင်ဝါးလုပ်နေသည်။
ကျနော်၏ ဖြေရှင်းတောင်းဆိုချက်များကို ဖယ်ထားကာ တဖက်သတ်ပြောဆိုချက်များကိုချည်း မေးလ်ဖြင့်ဖြန့်ကာ အချိန်ကုန် ကီးဘုတ်စားခံနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရချေသေး၏။
ကျနော် သူများနိုင်ငံရောက်နေသည့် သုံးနှစ်တာအတွင်း တစ်ခါမှ စာရေးမပျက်ခဲ့ဘူးပါ။ ရေးဖြစ်သမျှစာမူများကို (၁) ပြည်တွင်းမီဒီယာ၊ (၂) ပြည်ပမီဒီယာနှင့် (၃) အွန်လိုင်းမီဒီယာများသို့ သင့်သလို၊ နီးစပ်သလို ပို့လိုက် ပေးလိုက်ပါသည်။
ပြည်တွင်းမီဒီယာများတွင် ရေးသမျှအတွက် စာမူခ ရပါသည်။ တချို့ကို အိမ်ကိုလွှဲလိုက်ပြီး မိတ်ဆွေ လူနိုင်များကဆင့် ရသမျှစာမူခကတော့ သူတို့ အရက်ဖိုးဖြစ်သွားသည်က များပါသည်။ ကျနော်ကလည်း “အေးကွာ စာမူပါရင် မင်းတို့ သွားသာ မော့လိုက်ကြတော့”ဟု အလှူပေးထားလိုက်ပါသည်။
ပြည်ပမီဒီယာများအတွက် စာသီးသန့် မရေးသော်လည်း နာဂစ်မှတ်တမ်းလို ဆောင်းပါးမျိုးကို သူတို့က ကြိုက်၍ သုံးတာမျိုးရှိပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတစ်ခုက ထုတ်သော သတင်းစာ (အမည်မဖော်ပြလို) တွင်လည်း ကျနော် လိုအပ်သလို ရေးပေးပါသည်။ နာမည်ကြီးမီဒီယာကြီးတစ်ခုတွင် ပါဖူးသော သတင်းနည်းပညာသစ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် (အတိအကျ တစ်ပုဒ်ထဲသာ) မှ လွဲ၍ မည်သည့် စာမူခ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခကိုမှ တောင်းယူခြင်း၊ ရယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အချို့က ပေးသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပါ။
အွန်လိုင်းမီဒီယာဆိုရာတွင် ဘလော့ဂ်မှသည် ကိုယ်သန်သလို လုပ်ကြသော အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းများအထိ ဆိုလိုပါသည်။ အများအားဖြင့် ဝါသနာပါရာ စုပြီးလုပ်ကြခြင်းကြောင့် ငွေကြေးအတွက်ဟူ၍ တခါတရံမှ ရည်စူးရေးသား၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဖူးပါ။ ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်းမှာ စာမူ ၂ ပုဒ်ကို ပြည်တွင်းစာစောင်တစ်ခုက ကမ်းလှမ်းဝယ်ယူစဉ်ကလည်း ကာယကံရှင်စာရေးသူနှင့်သာ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဘာမှ စွက်ဖက်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပါ။
လောကအလှက စာမူကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်သည်ဟု မူထားကြောင်းသိသော်လည်း ကျနော်အပါအဝင် ကျနော်နှင့် ပတ်သက်၍ ခင်ရာမင်ရာစာမူပေးကြဖူးသူများသည် ငွေကြေးအတွက် မဟုတ်ဟု ကြိုတင်အသိပေးပြီး စေတနာရိဖြင့်သာ ပေးခဲ့ပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင် သူတပါးစာမူကို ရောင်းစားသည်ဟု ရှေ့နောက် မသင့် အထောက်အထားမရှိ စွပ်စွဲသည်ကိုတော့ ဖြေရှင်းပြနေရန် မလိုအပ်ဟု ထင်၍ ဘာမှ မပြောခဲ့ပါ။ သို့ သော် ကိုယ်နှင့် ရင်းနှီးသူများက တစ်စုံတရာ သံသယမရှိသော်လည်း သိပ်ပြီးမသိသေးသူများဟု ဇဝေဇဝါဖြစ်ကြကြောင်း သိရ၍ ချရေးလိုက်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတချို့ကလည်း နည်းနည်းပြောပါဟု တိုက်တွန်း၍ ရေးပါသည်။
(၁) ပြည်တွင်းဂျာနယ်အချို့အတွက် စာမူများကို စာမူခဖြင့် (လတ်တလောတွင် ပင်တိုင်ကဏ္ဍတစ်ခုရေးရန် ဂျာနယ်တစ်စောင်နှင့် သဘောတူထားပြီး)၊ (၂) ပြည်ပမီဒီယာများတွင် ရေးဖြစ်လျှင် အဆင်သင့်သလို စာမူခ (သို့မဟုတ်) အခမဲ့ဖြင့်၊ (၃) အွန်လိုင်းမီဒီယာအတွက် လုံးဝ အခမဲ့ဖြင့် ဝါသနာအလျောက်စာများ ရေးနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးချင်ပါသည်။
သိက္ခာချချင်ရုံ၊ သင်ကာဆိုတဲ့ကောင်ကို ချိုးချင်ရုံ ဟူသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် သွားပုပ်လေလွင့်ပြောဆိုမှုများကို ဘယ်လောက်အထိ အချိန်ကုန်ခံ၊ ဖုန်းဖိုးအကုန်ခံ၊ အိန္ဒြေအပွန်းခံ၊ ကီးဘုတ်အပါးခံပြီး လုပ်ဆောင်နေနိုင်မည်လဲ စောင့်ကြည့်ချင်ပါကြောင်း …။ လောကအလှဟု အမည်တပ်ပြောဆိုသေည်လည်း မဂ္ဂဇင်းကို ငွေစိုက်ထောင်ထားသည့် အယ်ချုပ်အမည်ခံ တစ်ဦးတည်းကိုသာ ရည်ညွှန်းပါသည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်ဟု ဖော်ပြထားသူများ၊ အခြား ပတ်သက်နေသူများနှင့် ကတောက်ကဆလည်းမဖြစ်ဖူး၊ ရည်လည်း မရည်ရွယ်ပါကြောင်း …။
ရည်ညွှန်းသူ၏ ပါစင်နယ်ဘလော့ဂ် Click Here
ရည်ညွှန်းသူ၏ မေးလ် Click Here
ဟမ္ ဟုတ္လား။ အဲဒီလို ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။
သူတစ္ခုခု အထင္လြဲေနတာ၊ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေခ်ာက္တြန္းထားတာ ျဖစ္မယ္။
ဒါေပသည့္ ကိုယ္ေကာင္း ေခါင္းမေရြ႕ပါဘူးေလ…
ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္ေနရာကမွ သတင္းအခ်က္အလက္ မရနိုင္ခဲ့တာရယ္၊ မြန္းသက္ပန္ ကိုယ္တိုင္က တိုက္ပဲြေတြနဲ႔ ကင္းကင္း ေနခ်င္တာရယ္ေၾကာင့္ ဘာမွ ၀င္မေျပာခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအယ္ဒီတာ စာရင္းမွာ ပါတဲ့သူတေယာက္အေနနဲ႔ ၊ နွစ္ေယာက္စလံုးနဲ႔ ခင္မင္ေနဆဲ သူတေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာသင့္တာကိုေတာ့ တခါေလာက္ ၀င္ေျပာပါရေစ။
ေလာကကို လွေစခ်င္လို႔ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေစဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကျပီးတဲ့ေနာက္ အခန္႔မသင့္တဲ့ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခဲ့ၾကတဲ့ အနုပညာရပ္၀န္းတခုကို ကိုယ္ေၾကာင့္မို႔ မထိခိုက္ေစခ်င္ပါဘူး။
မာန္မာနေတြ ေဒါသေတြ အထင္လဲြမႈေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ပူေလာင္မႈေတြပဲရိွိေနမွာပါ။
အခ်ိန္တစ္ခု ျပီးဆံုးတဲ့အခါ ခြင့္လႊတ္ျပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ေနဖို႔ မေတာင္းဆိုေပမယ့္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဘက္ လစ္လွဴရႈမႈေလးေတြ နဲ႔ ေလာကအလွကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွင္သန္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုနိုင္ခြင့္ရွိမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။
(စိတ္ညစ္မခံနိုင္တဲ့ က်မမြန္းသက္ပန္ ကိုလည္း နွစ္ေယာက္စလံုး နားလည္ေပးနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္ )
မၾကိတ္ႏိုင္မခဲႏိုင္ မဟုတ္မဟပ္ေတြ လွည့္ပတ္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အတြက္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ကာကြယ္ ေျပာဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။
လုပ္စရာရွိတာေတြပဲ အာရံုစိုက္ပါ။ စီစဥ္ထားတာေတြ အဆင္ပါေျပ MTP ေရ..
အဲလိုေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဘယ္သူေတြ ဘာေတြေျပာေနၾကတုန္း….
စံုစမ္းေပးရမလား…. သိတယ္မလား ဦးစံရွား ေျမးေလ… ဟဲဟဲ